Xisbiyada MP iyo V oo u muuqda in ay guul ka gaarayaan doorashada EU - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
M = Moderaterna, FP = Folkpartiet, C = Centerpartiet, KD = Kristdemokraterna, S = Socialdemokraterna, V = Vänsterpartiet, MP = Miljöpartiet, SD = Sverigedemokraterna, JL = Junilistan, PP = Piratpartiet, FI = Feministiskt Initiativ, ÖVR = Kuwa kale.
Xisbiyada MP iyo V oo u muuqda in ay guul ka gaarayaan doorashada EU
La daabacay tisdag 11 februari 2014 kl 10.26
Xisbiyada Doogga ama Miljäpartiet iyo Bidixda ama Vänsterpartiet ayaa u muuqda in ay codad badan ka helayaan doorashada gu’gaan la qaban doono oo lagu dooranayo xubnaha xildhibaanada xisbiyada Iswiidhen u fadhiyi doonaa baarlamaanka Midowga Yurub. Sidaasna waxaa lagu muujiyey ra’yi-ururin uu soo diyaariyey Raadiyaha Iswiidhen.
Labadaan xisbi ayaa u muuqda in ay doorashada ka heli doonaan codad ka badan boqolkiiba toban, taas oo ah tiro badan tan ka filayaan doorashada qaranka oo la qaban doono bisha Sebteember ee sannadkaan. Xisbiga Dadweynaha ama Folkpartiet ayaa isaguna u muuqda in uu natiijo wanaagsan ka keenayo doorashada baarlamaanka Midowga Yurub oo dhici doona bisha Mey ee sannadkaan.
Dhanka xisbiga Dimoqraadiyiinta Iswiidhen ama Sverigedemokraterna oo isagu ku sifoobey ajnebi-diid ayey u muuqataa in uusan doorashadaan ka gaari doonin heerkii uu filayey. Ra’yi-ururintaan wuxuu xisbigaani helay boqolkiiba 4.8 oo ah in tiro ka hooseysa natiijada ay ka filayaan doorashada qaranka.
Xisbiga Masiixiyiinta dimoqraadiga ah ama Krisdetmokraterna ayaa sida ka muuqata natiijada ra’yi-ururintaan u baahnaan doona in uu si xooggan u galo olole. Hadda wuxuu helay boqolkiiba 2.8, taas oo micneheedu yahay in uu luminayo xildhibaanka qur ah ee u fadhiya baarlamaanka Midowga Yurub. Xisbiga Piratpartiet ayaa isaguna u muuqda in uu luminayo labada xildhibaan ee hadda u fadhiya baarlamaanka Yurub.
In ku dhow boqolkiiba 55 dadkii wareysiga laga qaaday ayaa sheegay in ay codkooda dhiiban doonaan doorashada baarlamaanka Midowga Yurub oo dhici doonta bisha Mey.